Imibuzo Ebuzwa Rhoqo-YTpals
Nazi iimpendulo kwimibuzo yethu ebuzwa rhoqo. Ukuba awukwazi kufumana mpendulo apha, sithumele i-imeyile.
Ndiyisebenzisa njani indawo?
Xa undwendwela i-YTpals, cofa kwikhonkco "lokuNgena / lokuBhalisa" kwimenyu ephezulu yesihloko.
Uyacelwa ukuba ungene kwiakhawunti yakho kaGoogle (YouTube). Nje ukuba ungene kwiakhawunti yakho, vele wamkele ii -appemvume zokusebenza kwaye uya kubhekiswa kwi-portal yelungu lakho.
Nceda uqaphele: asilufumani ulwazi lwakho lokungena okanye asinakho ukufikelela kwiakhawunti yakho yeYouTube nantoni na. Iakhawunti yakho inokusebenzisa ngokukhuselekileyo i-YTpals ngaphandle kokukhathazeka nge-YTpals okanye elinye iqela lokufumana ukufikelela.
Xa ukwindawo yokungena yelungu, uziswa ngezicwangciso ze-4 ze-YTpals, ezibandakanya isiSeko, isiQali sokuQala (esaziwa kakhulu), iShishini kunye noMdumo. Kuxhomekeke kwiimfuno zakho ezithile kunye neemfuno, unokuthatha isigqibo sokuhamba ngesicwangciso sasimahla okanye umrhumo omncinci wenyanga, yiya ngesicwangciso esihlawulelweyo esifana nesicwangciso seShishini okanye soDumo.
Ikhuseleke kangakanani iYppals?
I-YTpals yinkonzo ekhuselekileyo nethembekileyo ngamalungu angaphezu kwama-300,000 +, ngokukhula ngomzuzu! Ubumfihlo bakho kunye nokukhuseleka yinjongo yethu ye- # 1, yiyo loo nto ke siphuhlise iikhowudi ezomeleleyo kwaye sikhuselekile kwiwebhusayithi sisebenzisa i-encryption engama-256.
Ngaba ulwazi lokungena kwiakhawunti lugcinwe kwiiYTpals?
HAYI! Asifumani naluphi na ulwazi lwakho lokungena kwi-YouTube / Google kwaye sigcina kuphela igama lesitayile sakho, i-URL yesitayile kunye nedilesi ye-imeyile ngaphakathi kwidatha yethu ukuze inethiwekhi ikwazi ukuhambisa ababhalisele kuwe. Akukho Okuninzi!
Iinkcukacha zesicwangciso saSimahla (isiCwangciso esiSisiseko)
Xa ucofa iqhosha elithi "Yenza kusebenze", uya kuthunyelwa kwiphepha apho kufuneka ubhalise kwezinye iziteshi ezili-10 kwaye uthande iividiyo ezili-10. Emva kokucofa iqhosha eliluhlaza "Yenza usebenze", nceda ulandele ngononophelo imiyalelo esesikrinini ukuze usebenze ngempumelelo nesicwangciso.
Ukuba ufumana naziphi na iingxaki ukuzama ukuthanda kunye / okanye ukurhuma kwijelo, cofa iqhosha elithi "Tsibela" ukubonisa isitishi esitsha. Xa ubhalise ngempumelelo kwiitshaneli ze-10 kwaye uthanda iividiyo ze-10, isicwangciso esisisiseko siya kusebenza kwaye uya kufumana ababhalisi be-5 ngaphakathi kwexesha lokuvula le-24.
Le nkqubo intsha isebenza kakuhle kwaye iya kubabuyisela kuwe bonke ababhalisile aba-5 ngaphambi kokuba kuphawulwe iiyure ezingama-24, ngaphambi kokuba uphinde wenze iqhosha, kodwa khumbula ukuba abanye abantu banokungabhalisi kuwe, bakubangela ukuba ufumane malunga no-3- Ababhalisi aba-5 ngexesha lokusebenza ngalinye. Abo bazikhuphele ngaphandle kwabanye abasebenzisi abafunyenwe ngeYTpals banqatshelwe ngokuzenzekelayo.
Isicwangciso esiSisiseko sinezithintelo ezi-2 eziphambili, oko kukuthi uvunyelwe kuphela ukusebenzisa ixesha elinye iiyure ezingama-24 kwaye kuya kufuneka ungene kwi-YTpals ngalo lonke ixesha ukwenza isicwangciso sakho siphinde sisebenze. Oku kuthetha ukuba, emva kokuba ucofe iqhosha u "activate", awuzokwazi ukucofa iqhosha u "activate" kwakhona ezinye iiyure ezingama-24. Xa ixesha leeyure ezingama-24 liphelile kwaye uvumelekile ukuba ucofe iqhosha u "Vuselela" kwakhona, uya kufumana i-imeyile ezenzekelayo yokukhumbuza ukuba ukhethe ukufumana le nto.
Iinkcukacha zesicwangciso saSimahla (iSicwangciso se Starter)
Xa ucofa iqhosha elithi "Yenza kusebenze", uya kuthunyelwa kwiphepha apho kufuneka ubhalise kwezinye iziteshi ezili-20 kwaye uthande iividiyo ezili-20. Emva kokucofa iqhosha eliluhlaza "Yenza usebenze", nceda ulandele ngononophelo imiyalelo esesikrinini ukuze usebenze ngempumelelo nesicwangciso.
Ukuba ufumana naziphi na iingxaki ukuzama ukuthanda kunye / okanye ukurhuma kwijelo, cofa iqhosha elithi "Tsibela" ukubonisa isitishi esitsha. Xa ubhalisile ngempumelelo kwiitshaneli ezingama-20 kwaye uthandile iividiyo ezingama-20, isicwangciso se-Starter siza kwenziwa kwaye uya kufumana ababhalisile abali-10 ngaphakathi kwexesha le-12 lexesha lokuvula.
Le nkqubo intsha isebenza kakuhle kwaye iya kubabuyisela kuwe bonke ababhalisile aba-10 ngaphambi kokuba kuphawulwe iiyure ezingama-12, ngaphambi kokuba uphinde wenze iqhosha, kodwa khumbula ukuba abanye abantu banokungabhalisi kuwe, bakubangela ukuba ufumane malunga no-7- Ababhalisi aba-10 ngexesha lokusebenza ngalinye. Abo bazikhuphele ngaphandle kwabanye abasebenzisi abafunyenwe ngeYTpals banqatshelwe ngokuzenzekelayo.
EsiCwangciso se Starter sineemehluko ezimbini eziphambili kwiSicwangciso esiSisiseko. Umahluko wokuqala kukuba uyakwazi ukuwusebenzisa kwaye ufumane ababhalisile be-10 qho kwiiyure ze-12 endaweni yeeyure ze-24. Umahluko wesibini kukuba endaweni yokubhalisela ezinye iziteshi ze-10, kuya kufuneka ubhalise kwi-20. Ukubhalisela ukubuyela kwi-20 ezinye iziteshi sesona sizathu siphambili sokuba esi sicwangciso sivunyelwe ukuba senziwe rhoqo kwiiyure ze-12.
Ndizama ukwenza isicwangciso, kodwa inkqubo ayindivumeli ukuba ndibhalisele amajelo.
Ukuba unengxaki ekubhaliseleni ijelo nangasiphi na isizathu, cofa nje iqhosha elithi “Tsiba” elimthubi ukuze ulayishe ijelo elitsha. Nje ukuba ijelo elitsha lilayishwe, ungazama ukubhalisela oko kwaye kufanele kusebenze.
Ukuba ayisebenzi, cofa indawo "yokungena" kwikhonkco phezulu kwiphepha ukuze ungene kwakhona emva koko uya kuba nakho ukuqala kwakhona apho ubuyeke khona. Oku kuyalihlaziya iphepha.
Ndisirhoxisa njani isicwangciso sam sasimahla?
Ukucima isicwangciso sakho sasimahla kulula. Ungangeni ngokulula kwiYTpals kwaye usebenzise iinkonzo zethu kwaye awusayi kuphinda ufumane okanye uthumele nababhalisi abatsha. Nceda ugcine engqondweni ukuba amajelo obewubhalisile ngexesha lokusetyenziswa kwe-YTpals kufuneka ihlale kwiakhawunti yakho ukuba ilungile kwabanye abasebenzisi.
Iinkcukacha zeShishini, ii-Elite kunye neeNkcukacha zooSaziwayo (Izicwangciso ezihlawulelweyo)
Izicwangciso zeShishini, i-Elite kunye neeDumo zithandwa kakhulu ngenxa yezizathu ezahlukeneyo.
Xa ubhalisa kwiShishini, kwi-Elite okanye kwisicwangciso sooSaziwayo, ufumana ngokuzenzekelayo ababhalisile abali-10-15 (Ishishini), ababhalisi abangama-20 ukuya kwabangama-30 (Elite), okanye ababhalisile abangama-40-60 (Osaziwayo) yonke imihla, 100% ngokuzenzekelayo. Abanye abasebenzisi bazakubhalisa ngaphandle, bekushiya malunga ne-70-80% yababhalisi emva kokuvula nganye.
Ngokungafaniyo nezicwangciso zasimahla, izicwangciso ezihlawulelweyo zi-100% ngokuzenzekelayo, oko kuthetha ukuba xa usayinela, awuzukuphinda ubuye kwiYTpals kwakhona. Siza kukunika ngokuzenzekelayo ababhalisi abatsha yonke imihla ukuze iakhawunti yakho ikhule ngesantya esikhuselekileyo, ngaphandle komzamo!
Amaxabiso esiwahlawulisayo ngezi zicwangciso mancinci kakhulu kunamawebhusayithi amaninzi anokuhlawulisa ababhalisi "bobuxoki" abafikiswa bonke ngaxeshanye endaweni yokubonakala kwendalo, ukukhula kwemihla ngemihla njengathi.
Ezi zicwangciso zihlawulweyo ziqinisekisa ukuba ukukhula kwakho kubonakala kwendalo kwaye kubiza iqhezu lexabiso!
Ndenze ukuba isicwangciso seShishini, se-Elite okanye sooDumo, kodwa ubhaliso lwam alusebenzi.
Ukuba uthenge ngempumelelo i-Enterprise, i-Elite okanye i-Celebrity plan, kodwa ukubhalisa kwakho akusebenzi, nceda Qhagamshelana nathi kwaye usithumele umfanekiso wentengiselwano okanye iphepha lokufumana kunye ne-URL yesiteshi sakho, esiya kuthi isinike lonke ulwazi esiludingayo ukukunceda.
Ndisebenzise i-Enterprise, i-Elite okanye i-Celebrity plan ngaphantsi kweeyure ezingama-24 ezidlulileyo kwaye andikafumani bantu ababhalisileyo okwangoku.
Xa uthenga i-Enterprise, i-Elite okanye i-Celebrity plan, ijelo lakho lingena kwinethiwekhi ngaphakathi kweeyure ezimbalwa kwaye lihlale ngaphakathi kulo iiyure ezingama-24, nokuqala kosuku lwakho lokuqala. Ngeli xesha lamaxesha angama-24, uyakufumana isabelo semini sakho sababhalisi kwaye umjikelo uphinda kwakhona ngosuku olulandelayo. Gcina ukhumbula, ababhalisile abaze ngephanyazo, kodwa bonke bahanjiswa kwisithuba seeyure ezingama-24, usuku ngalunye. Ukuba awufumani nabaphi na ababhalisile ngaphakathi kweeyure ezingama-48, nceda usithumelele umyalezo kwaye siza kujonga kuwo.
Ababhalisi bam ababhalisi. Kwenzekani?
Ukuphendula lo mbuzo, kukho izinto ezimbalwa ekufuneka ziqwalaselwe. Nantsi into ekufuneka uyazi:
Xa usebenzisa inkonzo ye-YTpals, amanani abonisa ukuba malunga ne-70-80% yababhalisi oyifumanayo yonke imihla ihlala kwiakhawunti yakho. Ngale nto ithethwayo, sihlala sihambisa izinto ezongezelelweyo ukunceda ukubuyisela ilahleko.
Isizathu sokuba bangahlali bonke kwiakhawunti yakho kungenxa yokuba abanye abantu abayilandeli imigaqo kwaye bangabhalisi, kodwa bathintelwe kwaye / okanye bohlwaywa ngenxa yoku kwaye i-YouTube isusa ngokuzenzekelayo abanye ababhalisile.
Ngaphaya koko, ii-algorithms zamva nje zikaYouTube zihlala zicima isahlulo sabarhumeli abazisiweyo. Ukwehlisa inani lokususa iYouTube, kuya kufuneka ujonge ekubekeni iividiyo ezintsha kunye nokwandisa izimvo kunye nezinto ozithandayo kwiividiyo zakho. Ukuba unababhalisi abangaphezulu kuneembono, ayenzi ngqiqweni ukuba yenzeke, ke iYouTube iya kuthanda ngakumbi ukucima ababhalisile abaninzi.
Uninzi lwabathengi bethu bonwabe kakhulu ngenkonzo kuba iyanceda ishaneli yabo ukuba ikhulele ngexabiso elifikelelekayo.
Ndingathanda ukucima inkonzo yam kwaye ufumane imbuyiselo.
Ukuba uthenga isicwangciso sokubhalisela kwaye awonwabanga ngenkonzo, nceda uqhagamshelane nathi kwiintsuku ezi-3 zomhla wakho wokurhuma kwaye uyakuhlawula ngokupheleleyo kwaye urhoxise ukubhalisa kwakho. Ukuba unxibelelana nathi ngaphezulu kweentsuku ezi-3 emva kokuba ubhalisile kwenziwe intlawulo kwaye ucela ukubuyiselwa imali, iqela lethu liya kuyiphinda i-akhawunti yakho kwaye ngenxa yempazamo esekupheleni kwethu, siyakubuyisela i-oda yakho ngokupheleleyo, okanye sibuyise imali ebekiweyo Iintsuku ezingasetyenziswanga ngenyanga, okanye ungabuyisi mali ukuba ziintsuku ezisi-7+ emva kokuba ubhalisile kwinkonzo yethu.
Ndiyirhoxisa njani imali yam ebhalisiweyo?
Xa uthenga i-Enterprise, i-Elite okanye i-Celebrity subscription, uza kuhlawulwa ngokuzenzekelayo ngosuku olufanayo lwenyanga nganye. Ukuba ngaxa lithile awusadingi ukubhaliswa kweYTpals, thumela nje umyalezo ngephepha lethu loQhakamshelwano kwaye siza kuseta iakhawunti yakho ukuba iphele ekupheleni kobhaliso lwenyanga yakho yangoku.
Ukuba, umzekelo, ubhalise kwi-23rd yenyanga, kodwa usibhalele malunga nokucima iakhawunti yakho nge-10th kwinyanga ezayo, siza kuseta iakhawunti yakho ukuba iyarhoxisa kwiintsuku ze-13 kamva, ekupheleni kobhaliso lwakho lwenyanga. Ukuba ukhetha ukurhoxiswa kwangoko, sazise nje kwaye nathi singakwenzela oko.
Awunyanzelekanga ukuba uhlale ubhalisile nangaliphi na ixesha, kodwa kuya kufuneka usibhalele xa sele ukulungele ukurhoxisa. Siya kuthi ke siwuphathe sithumele umyalezo wokungqina.
Ndingayisebenzisa inkonzo ehlawulelweyo nge-1 ngenyanga?
Unokwenza isicwangciso esihlawulelweyo usebenzisa indlela yethu yokuhlawula kwindawo kwaye urhoxise isicwangciso sakho nangaliphi na ixesha. Thumela i-imeyile ngokulula emva kokuba ubhalisele isicwangciso esihlawulelweyo kwaye siza kuseta iakhawunti yakho ukuba iphele emva kwenyanga enye kwaye awuyi kuphinda uhlawulwe.
Akukho khadi lamatyala? Akhongxaki. Hlawula ngamakhadi ezipho!
Ngoku ungathenga i-Enterprise, i-Elite okanye iiplani zoosaziwayo usebenzisa amakhadi ezipho!
Izibonelelo zokusebenzisa ii-Openbucks "Hlawula ngamakhadi eZipho"
UKUVIKELA: +150,000 yeendawo zokulayisha imali yakho kwikhadi lesipho.
Akukho ntlawulo: Akukho kulayisha kwakhona, ukusetyenziswa okanye iifizi zokwenza kusebenze! Yimali yakho - kwikhadi lesipho.
KUPHELAAwunyanzelekanga ukuba ubhalise okanye unike ulwazi lomntu siqu / lwebhanki ukuhlawula ngamakhadi ezipho.
KUNYE: Thenga kwaye uhlawule ngamakhadi ezipho kwidesktop, kwithebhulethi okanye kwiselfowuni.
Thenga ikhadi lesipho kwiCVS / Pharmacy, kwiDola Jikelele okanye kwi-oBucks. Ungajonga indawo ekufutshane yomthengisi ngokufaka ikhowudi yakho yeziphu kwenye yewebhusayithi.
Ngena kwiakhawunti yakho yeYTpals kwaye ukhethe u "Enterprise", "Elite" okanye "Celebrity" icebo lokuphucula nge.
Khetha "Hlawula ngamakhadi esipho" xa uphuma uze ufake iinkcukacha zekhadi lakho lesipho xa ukhuthazwa.
Yiyo leyo! Ngoku ungonwabela ukuphuculwa kwakho!
Joyina inethiwekhi yethu engaphezulu kwama-500,000 abaphathi beziteshi ze-YouTube abafumana ababhalisi be-YouTube simahla ukunceda ukukhulisa ijelo labo le-YouTube.
Fumana ababhalisi basimahla ngoku!